Ihe 10 dị mkpa maka imepụta ọdịnaya afọ ojuju | Martech Zone
Sunday, October 18, 2015 Tọzdee, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
Adaba bu ikpo okwu mmekorita iji mee ka ihe omuma di n'ime nhazi gi. Ha na-ezo aka na nke a dị ka injin ọdịnaya ma kọwaa ihe iri - ma site na nzukọ na site na ikpo okwu - na-eme ka mmepụta ọdịnaya na-arụ ọrụ nke ọma.
Kedu ihe bụ ọdịnaya ọdịnaya?
Injin ọdịnaya bụ ndị mmadụ, usoro, na ngwaọrụ ndị na-ewepụta ọdịnaya dị elu, ezubere iche ma na-agbanwe agbanwe n'ọtụtụ ụdị mgbasa ozi, gụnyere ọdịnaya blog, webinars, ebook, infographics, videos and slidesets.
Zụrụ Executive - N'ihi na nyocha, mmepe, imewe, na ogbugbu nke usoro ịre ahịa ọdịnaya chọrọ akụnụba, ị ga-enwerịrị zụrụ ihe ogologo oge site n'aka ndị isi gị.
Ihe gbara ọkpụrụkpụ - Ihe omume nke gunyere oru, ihe mgbu, ntughari uche, na ochicho nke ndi mmadu elere anya dika ntinye.
Otu Ọdịnaya - Ebe ndi mmadu choro igha enweta akwukwo ha biputara na ebe enwere ike igbalite ya.
Ndị Okike - Otu ndi mmadu nwere ike ide, dezie, ihu ihe ma jikwaa ọdịnaya a.
Ndị mmebe ihe na ndị omenaala - Ndị na-ese ihe osise, ndị editọ vidiyo, infographic na ndị ọkachamara ebook na-ewere ọdịnaya ma gbanwee ya na nka.
Social Media, Mgbasa Ozi, SEO & Marketing Authomation Collaboration - Ime nnukwu ọdịnaya ezughị, ị ga-enwerịrị ndị otu na stratregy iji kwalite ya.
Workflows, Asset Management & Njikọ Aka Ngwá Ọrụ - Ngwaọrụ na-emepụta ọdịnaya dị ka Adaba ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ site na etiti, na-ekenye ọrụ, usoro iheomume na nnabata.
Editorial Kalinda - ikike ịtọọ oge ma gosipụta ọdịnaya dị mkpirikpi na ogologo oge maka atụmatụ ọdịnaya gị.
Ntuziaka Voice & Brand - Akara ntuziaka na izipu ozi dịịrị ndị okike gị na ndị ọkachamara iji hụ na agbanwe agbanwe na ọdịnaya gị niile.
Analytics - ikpo okwu iji soro arụmọrụ maka ibe ọdịnaya ọ bụla, mkpọsa ọ bụla, otu ọ bụla, yana atụmatụ niile.
The Adaba ikpo okwu jikọtara na Salesforce, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple Mail, Outlook ma nwekwaa ngwa mkpanaka gam akporo na iOS.
Anyị na-eji njikọ njikọ anyị na post a, dị njikere ịbanye ma were Adaba maka ule mbanye!
Tags: ngwa igweakwụkwọ ozi apụlbitiumkalenda ọdịnayaọdịnaya ọdịnayammepụta ọdịnayaGmailngwa ngwa googleios ngwaoktaele ihe anyandị ahịaWrikeike
Gịnị Bụ Mmemme Ngosipụta Ngosipụta Mmemme?